बाबु छोरा हत्या अभियोगमा आफ्नै वुहारी सहित तीन जना पक्राउ
4,178 पटक पढिएको
सिरहा, १७ जेष्ठ। सिरहा प्रहरीले बाबु छोरा हत्या अभियोगमा तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। अर्नमा गाउँ पालिका १ महनौरका ६० वर्षिय चुलाही भन्ने चन्देश्वर पाल र उनको १९ वर्षिय छोरा सन्त कुमार पालको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा चन्देश्वरका साँइली बुहारी शान्तिदेवी पाल, गोलबजार नगरपालिका ४ का ६५ वर्षिय बेचु पाल, अर्नमा गापा १ महनौरकै ४८ वर्षिय जनिफ मियाँलाई आज पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
उनीहरुको यही जेष्ठ ८ गते विहान २ बजेको आसपासमा खुकुरी प्रहार गरी हत्या भएको थियो। उनीहरुको घाँटी र टाउकोमा खुकुरी प्रहारबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
व्यक्तिगत रिसिविका कारण बाबु छोराको हत्या गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी अर्जुन प्रसाद तिम्सिनाले जानकारी दिए।
सन्त कुमारको यहि जेष्ठ ११ गते मोरङका एक युवतीसँग विवाह छिनेको थियो। विवाहको तयारी भईरहेको समयमा हत्या भएकाले त्यसैलाई आधार बनाएर अनुसनधान गर्दा घटनामा संलग्नहरुसम्म पुगिएको एसपी तिम्सिनाले बताए।
‘सन्त कुमारको विवाहको तीन दिन अघि हत्या भएकाले विवाहकै विषयमा खोज तलास गर्यौं; त्यही अनुसन्धानले हामीलाई हत्यामा सम्लग्नहरुसम्म पुर्यायो।’ उनले भने, ‘सन्त कुमारको जो युवतीसँग विवाह तय भएको थियो, उनीसँगै बेचु पालको छोराको विवाह हुने पक्का भएको थियो। बेचुको छोरालाई विवाह गरेबापत केटीपक्षले विराटनगरमा जमिन दिने र सो जमिनमा घर समेत बनाई दिने भएका थिए। आवश्यक परे व्यवसाय गर्न पुँजी समेत दिने पक्का भएपनि छोराले युवतीको पहिला पनि विवाह भएकाले अस्वीकार गरे पछि सन्त कुमारसँग विवाह तय भएको थियो।’
छोरालाई मनाई रहेकै वेलामा सन्त कुमारले विवाह गर्ने भएपछि त्यसैको रिसिविका कारण सन्त कुमारका भाउजु र जनिफको मिलेमत्तोमा हत्या भएको प्रहरीको भनाई रहेको छ।
शान्तिदेवीको सासु ससुरासँग राम्रो सम्वन्ध नरहेको, अङ्स नदिएको, माईतिबाट ल्याएको चाँदीको गहना पनि सासुले राखेको र देवको विवाहमा पनि तिम्रो चरित्रका कारण तिमी आए गाउँले छोराको विवाहमा नआउने भनेकाले नआउनु भनेपछि उनीपनि रिसाएका थिए। जानिफ शान्तिदेवीको श्रीमानको साथी हुन्। शान्तिदेवीका श्रीमान रोजगारीको लागि विदेशमा छन्।
यहि कुरा बेचुले थाहापाएपछि उनीहरुको हत्या गर्ने योजना बनेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। सासु ससुरासँग रिसाएका शान्तिदेवीले हत्या गरेबापत ५० हजार दिने, हत्यागर्न जानिफले बञ्चरो ल्याउने र खुकुरी बेचु आफैले ल्याउन सल्ह अनुसार हत्या भएको बताइएको छ।
तर, हत्या गर्ने राति योजना अनुसार शान्ति र जानिफ नआएपनि बेचन एक्लै आएर हत्या गरेको प्रहरीको भनाई रहेको छ।
हत्या भएको राती बेचु झोला बोकेर घछनास्थल आसपास देखिएको स्थानीले समेत बताएको प्रहरीले जनाए। बेचु अवकास प्राप्त शिक्षक रहको बताइएको छ।
हत्या भएको राति करिव १२ बजे सम्म विवाहको गित गाउने कार्य भईरहेको थियो। स्थानीयका अनुसार राती करिव १२ बजे सम्म गीत बजि रहेको थियो, विहान पख करिव ३ बजे हत्याको घटना गाउँ भरी फैलि सकेको बताउँछन्।
प्रहरीले हत्यामा संलग्न रहेको आशङ्कामा दर्जनबढी व्यक्तिहरुलाई पटक पटक सोधपुछ गर्ने गरेको भएपनि आज विहान तीनजलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ।
प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको खुकुरी एक थान, मोवाईल चार थान सहितका सामाग्री बरामद गरेको छ।
प्रहरी तालिम प्राप्त कुकुर, अन्य प्राविधिक डेटा अनुसन्धानबाट अपराधीसम्म पुग्न सफल भएको बताउँछन्। पक्राउ परेका उनीहरुलाई ज्यान मुद्दा दर्ता गराई आवश्यक अनुसन्धानको लागि ७ दिनको म्याद थप गरीएको छ।
हरिवानबाट कटुवापेस्त ...
सर्लाही, २१ असार। सर्लाही प्रहरीले कटुवा पेस्तोल सहित ए ...
रामेछाप बस दुर्घटनाम ...
फोटो : अकोक दोङको फेसबुकबाट। काठमाडौं, २१ असार। रामेछ ...
सर्लाहीको वनमा गाडेक ...
सर्लाही, २१ असार। सर्लाहीको वनक्षेत्रमा गाडेको अवस्थामा ...
छोरी शिक्षा विमा फार ...
जनकपुर २० असार। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्र ...
हरिवानबाट कटुवापेस्तोल सहित एक पक्राउ
रामेछाप बस दुर्घटनामा नौं को मृत्यु, २४ जना घाइते
सर्लाहीको वनमा गाडेको अवस्थामा शिशुको शव भेटियो
छोरी शिक्षा विमा फारम भरी सहयोग गर्न स्थानीयतहलाई मुख्यमन्त्री राउतको आग्रह
मधेस प्रदेश : ‘असारे विकास’ अनियमितता छानबिन गर्न उपसभामुखको संयोजकत्वमा समिति गठन
हत्या गरेको अभियोगमा महिला पक्राउ
प्रदेश सांसद कौशल यादवसहित दुई जना जसपाबाट निष्कासित
वीरगञ्ज महानगरद्वारा श्वेत पत्र जारी, अधिकांश योजना अधुरा र गुणस्तरहिन शिक्षामा व्यापक भ्रष्टाचार
रौतहटमा दुई भारतीय युवकको शव भेटियो
सिरहाबाट नकली नोट सहित तिनजना पक्राउ
सिरहामा बाबु–छोराको हत्या
सिरहाबाट चोरीएको स्काभेटर भारतमा भेटियो
कर्जन्हाका पूर्व मेयर पासवान समूहद्वारा महिलामाथि कुटपीट, घाइतेको उपचार हुँदै
सिरहाका युवक भारतीय सीमाबजार जयनरमा मृत भेटिए
सिरहा बम विस्फोट : आठ जना घाइते ,एकको अबस्था चिन्ताजनक
आपत्तिजनक अवस्थमा होटल सञ्चालक सहित छ जना पक्राउ
गोलबजारका एक होटल संचालक पक्राउ
गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन
गोलबजार नपा ४, सिरहा
मोवाईल : ९८५२८२८६५७
सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९
अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
सम्पादक : श्याम खनाल
Copyright © 2020 / 2022 - Gamakpost.com All rights reserved